धौलागिरिमा ‘थ्रिजी’ सेवा थप विस्तार « Light Nepal
धौलागिरिमा ‘थ्रिजी’ सेवा थप विस्तार
बागलुङ, २२ चैत । धौलागिरि क्षेत्रमा इन्टरनेट चलाउन प्रयोग हुने अत्याधुनिक ‘थ्रिजी’ सेवा विस्तारको काम अघि बढेको छ ।
हाल रहेको २१ ठाउँको सेवालाई बढाएर ७३ पु¥याइने नेपाल टेलिकम बागलुङले जनाएको छ । आउँदो वैशाख दोस्रो सातासम्म बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका ५२ नयाँ ठाउँबाट ‘थ्रिजी’ सेवा दिइने कार्यालयका वरिष्ठ इन्जिनियर केशव शर्माले बताउनुभयो ।
सेवा विस्तारसँगै बागलुङमा मात्र ३२ ठाउँबाट ‘थ्रिजी’ सेवा चल्नेछ । यसअघि यहाँ जम्मा नौ स्थानमा ‘थ्रिजी’ सेवा सञ्चालित थियो । सेवा विस्तारले चारै जिल्लाका अधिकांश भू–भागमा ‘थ्रिजी’ को पहुँच पुग्ने जनाइएको छ । हाल रहेको ‘टुजी’ सेवालाई पनि स्तरोन्नति गर्ने योजनामा नेपाल टेलिकम लागिपरेको छ ।
‘थ्रिजी’ प्रविधिमार्फत ‘भियोडी’, ‘भिडियो÷भ्वाइस च्याट’, तीव्र गतिको इन्टरनेट ‘सर्फिङ’ लगायतका सेवा उपभोक्ताले पाइरहेका छन् ।
टेलिकमले विभिन्न सुविधायुक्त ‘डाटा प्याकेज’ पनि ल्याएको छ । ‘थ्रिजी’ प्रयोकर्ताले एक ‘जिबी’ डाटा लिन रु ५०० मात्र खर्चे पुग्नेछ, जुन एक महिना अवधिको हुन्छ । यस्तै, पाँच ‘जिवी’ लिँदा रु एक हजार ८०० लाग्ने र त्यसले तीन महिनासम्म असीमित सेवा लिन सकिने जनाइएको छ ।
यस्तै, मुस्ताङ जिल्लाको जोमसोम र खैसाङमा गत वर्ष देखिनै ‘थ्रिजी’ सेवा सुचारु छ । अब ५२ स्थानमा थप हुने सेवाले चारै जिल्लाका सदरमुकाम, मुख्य बजार क्षेत्र र अधिकांश जनसङ्ख्याले बसोबास गर्ने ठाउँमा ‘थ्रिजी’ सेवा पुग्ने जनाइएको छ । सरकारले देशका केही ठाउँमा ‘फोरजी’ सेवा सञ्चालनमा ल्याए पनि धैलागिरिमा सुरु हुन थप एक वर्ष लाग्ने बताइएको छ । रासस
एक समयकी भाइरल तरकारीवाली एक्कासी यस्तो अवस्थामा भेटिएपछि (भिडियो सहित)
सीतापाइला-नौबिसे सुरुङ मार्ग: निर्माणले गति लियो
देशभर डेढ करोड मतदाता, कस्ता हुनेछन् मतपत्र ?
भट्टराईलाई गोरखा–२ अर्को झड्का, आयो यस्तो खबर
पैसावालको टिकट खोस्न राजपाका नेताहरु अनशनमा
६ गतेभित्र माग पूरा हुनुपर्ने सर्तसहित १० बुँदे सहमतिपछि डा. केसीले तोडे अनसन
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशनः अर्थनीतिमा नरम, राजनीतिमा कडा
वाम गठबन्धनमा सकस: ३ दिनमा सक्नुपर्ने काम २ सातामा पनि सकिएन
सम्पादक : महेश्वर तामाङ
रिपोर्टर/क्यामरापर्सन : मिलन खत्री